आँचल शर्मा बिहेपछि झनै ‘बोल्ड’ बन्दै, हेरौं ८ तस्बिर – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. आँचल शर्मा बिहेपछि झनै ‘बोल्ड’ बन्दै, हेरौं ८ तस्बिर – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
७ चैत्र २०७७, शनिबार March 20, 2021
तिनै चर्चित नायिका आँचल शर्माको चैत ५ गते जन्मदिन परेको थियो । नायिका आँचल शर्मा अब २५ बर्षमा लागेकी छिन् । सानै उमेरमा नै आँचलले धेरै चर्चा पाएकी छिन् । उनी चलचित्रमा मात्र नभएर म्यूजिक भिडियोमा पनि उत्तिकै व्यस्त छिन् ।
डाक्टर उदिप श्रेष्ठसँग प्रेम सम्बन्धमा बाँधिएपछि उनी झन् चर्चामा आइरहन्छिन् । कहिले उदिपको पुर्व पत्नीको कुरा बाहिरिएर त कहिले उदिपकी प्रेमीका समेत रहेकी सिपोरा गुरुङको कारणले चर्चामा आइरहिन् ।
आँचललाई अहिले थुप्रै चलचित्रबाट अफर आइरहेका छन् तर कथा, भूमिका र टिम हेरेर मात्र अभिनय गर्ने पक्षमा छिन् उनी । परिवारलाई महत्व दिने आँचल आफ्ना बुवालाई सबैभन्दा नजिकको साथी मान्छिन् ।
आफ्नो खुसीको तुलनामा परिवारको खुसीलाई प्राथमिकता दिने आँचल भन्छिन्–दर्शकको मायाले नै अझ राम्रो अभिनय गर्ने हौसला मिलेको छ ।
आँचल शर्माको बास्तविक नाम आँचल दवाडी हो । उनको जन्म १८ मार्च १९९५ मा काठमाडौंमा भएको हो । नाई नभन्नु ल ४ बाट नेपाली फिल्मी उद्योगमा पाइला चालेकी आँचलका जोनी जेण्टलम्यान, शत्रु गते, दाल भात तरकारीमा उनको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
फिल्मी क्षेत्रमा आउनुअगाडी उनले एक सौन्दर्य प्रतियोगिता जितेकी थिइन् । नायिका आँचल शर्माको बिहे पार्टीको चर्चा चलचित्र बजारमा मात्र होइन, उनका फ्यानहरुमाझ पनि चलेको थियो । त्यस्को मुख्य कारण थियो । आँचलले लगाएको १६ लाख मुल्य परेको भनिएको लेहेङ्गा ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको ७ चैत्र २०७७, शनिबार March 20, 2021 31 Viewed